Qarax ismiidaamin oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo kadhacay Beledwayne – Radio Daljir
Qarax ismiidaamin oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo kadhacay Beledwayne
Seteembar 10, 2017 11:30 b 0
Inta la xaqiijiyay 2 qof ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin oo kadhacay duhurnimadii maanta magaalada B/wayne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana ku dhaawacmay toban qof oo kalle.
Qaraxa ayaa kadhacay maqaayad u dhow xarunta maamulka gobolka ee magaalada Beledwayne, kadib markii qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa markii uu beegsaday shacab goobta fadhiyay.
Duqa magaalada Beledwayne Cali Dhuux Cali Mahad Alle ayaa ayaa sheegay dadka geeriyooday iyo kuwa dhaawacmay inay ahaayeen dad shacab ah oo goobta kusugnaa.
Dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa waxaa ku jiray dhowr wariye oo katirsan warbaahinta magaalada Beledwayne, waxaana ka mid ahaa C/Shakuur Maxamed oo u shaqeynayay Idaacadda Starfm iyo Saabtv, C/Qaadir Cumar Ibraahim RTN iyo Simba iyo Cabdullahi Cismaan Macallin Jubaland TV iyo codka Hiiraan.
Ciidamada amaanka ee Bossaso oo qabtay maandooriyeyaal (sawiro)
Xulashada Daljir & Cabdixakiim Xuseen, Daljir Garoowe (dhegayso)